Gufgaf|Online सन्जिब पराजुली र टीका प्रसाईंको कर्के नजर सार्वजनिक
सन्जिब पराजुली र टीका प्रसाईंको कर्के नजर सार्वजनिक
गफगाफ - गायक सन्जिब पराजुली र गायिका टीका प्रसाईंको नयाँ गीत कर्के नजर सार्वजनिक भएको छ । गीतकार आनन्द अधिकारीको शब्द रहेको उक्त गीतमा संगीत तथा एर्रेंज आशीष अविरलको रहेको छ । गीतमा भाइब एण्ड वेब ग्रुपको प्रस्तुति रहेको छ । राहुल शाह र अलीशा शर्मा अभिनीत यस गीतको भिडियोलाई राहुल शाहले नै निर्देशन गरेका हुन् ।
यो गीत गायक सन्जिब पराजुली र गायिका टीका प्रसाईंको संयुक्त एल्बम संग संगै मा समावेश गरिएको छ । सन्जिब र टीकाको यो जोडीले यस अघि नाइँ मलाई थाहा छैन, तिमी मलाई मन पर्छ, पहिलो भेटैमा, अलि अलि गर्दै लगायतका गीत गाएर श्रोता दर्शक को मन जित्न सफल भएका छन् ।
यो जोडीले गाएको नाई मलाई थाहा छैन बोलको गीतलाई दर्शकले अत्याधिक रुचाएका छन् । भर्खरै सार्वजनिक भएको गीत कर्के नजरमा नृत्य प्रतियोगीता आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको गायक सन्जिब पराजुलीले बताए । यो टिमले यस अघि नाइ मलाइ थाहा छैन बोलको गीतमा पनि नृत्य प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो ।
पैशा चोर्दा फस्यो पाँडे
गफगाफ - यस पटकको हास्य टेलिश्रिंखला भद्रगोलमा चे�
परिक्षामा किन दुबैजनाले फरक फरक नाम लेखेको...??
रबिन्द्र र देबेन्द्र दुईभाई एउटै कक्षामा पढ्दा रहेछन ।त्यतिकैमा
यस्को लागि त पर्चा चाहिन्छ नि ल्याउनुभएको छ ??
शर्मा जी एउटा मेडिकलमा साहुजी सँग...
शर्मा जीःसाहुजी मलाई बिष दिनुन्...
हिजो भर्खर किन्देको हैन ??फेरि आज चैँ किन चाहियो नि ??
हरि पर्कमा बसिरहेको थियो त्यतिकैमा हरिको ग्रलफ्रेन्ड सिता आएर..
‘जात्रै जात्रा’को अफिसियल चार पोष्टर सार्वजनिक
गफगाफ - आगामी जेष्ठ ३ गते रिलिज हुने सिनेमा ‘जात्रै जात्रा&r